Gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu qabtay control ku yaalla duleedka Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Jul 21, 2017
Ciidamada amaanka Dowladda Soomaaliya ee ku sugan degaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku dhigay shalay galab gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Wasiirka amniga Soomaaliya Max’ed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegey in ciidamada amniga ay qabteen gaarigaasi oo uu xusay in Al Shabaab ugu talo-galeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah.
Gaarigan ay qabteen ciidamada oo noociisu yahay Camary ayaa la dhigay goob ku dhow kontrolk Siinka dheer, waxaana ku baxay ciidamada amaanka ee halkaas ku sugnaa oo ka shakiyey.
Saraakiisha NISA ayaa sheegey iney furfureen qaraxyadii saarnaa, iyadoo la baadi goobayo dadkii la socday gaarigaas oo baxsaday sida wararku sheegayaan.
Inkastoo Ciidamada amaanku ay horey gaadiid badan oo qaraxyo laga soo buuxiyey uga soo qabteen magaalada Muqdisho iyo hareeeraheeda, haddana magaalada mararka qaarkood waxaa ka dhaca qaraxyo waaweyn oo lagu hoobto.
Xaalada Deegaanka Xeraale Oo Saakay Degan